Ntụle Brenton Harrison na-emegide ọgụ nke mgbochi na-emegide Turkey? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 17 March 2019	• 10 Comments
Ọ bụrụ na anyị ga-ekwere akụkọ ọhụrụ banyere Brenton Harrison Tarrant ọ ga njem ndị dị mkpa onye yiri ka ọ bụ akụkọ ihe mere eme na ọdịdị. Ego nke njem ya ga - esi na Bitconnect (ego mkpuchi). Nke ahụ na-ada ka ọ bụ credible alibi. Ihe kachasị mma bụ akụkọ na Tarrant yiri ka ọ chọrọ ịlụ ọgụ maka mbilite n'ọnwụ nke Alaeze Ukwu Ottoman. E kwuru na a na-ekwu na ị gara leta ma Turkey ma Pakistan; mba abụọ ndị nwere njikọ chiri anya na okwu okpukpe-akụkọ. A na-eme njikọ nke Anders Breivik. Ihe ndị Bulgarian gwara New Zealand Messenger na e dere ihe ndị ahụ gbasara ngwá agha na Cyrillic. Ihe odide a ga - egosiputa aha ndi agha ama ama na ndi mmadu n'akwukwo ihe mere eme site na Balkans. Agha a lụrụ agha megide Alaeze Ukwu Ottoman. Agha megide ndị Turks Ottoman na-esitekwa n'ike mmụọ nsọ maka onye na-eyi egwu Norwegian Anders Breivik.
Odi ka ngbata obi n'etiti ndi Kristain na ndi Alakpere di ka agaba elu na elu. Ya mere, a gaghị enwe m ihe ijuanya ma ọ bụrụ na anyị ahụ mmegide ngwa ngwa nke iyi ọha egwu na Europe na US. Buru n'uche na nke a nwere ike ịbụ ihe mkpuchi ọrụ nke ọrụ nzuzo ahụ meghachitekwara otu ìgwè ụjọ ha. Echere m na a ga-enwe njikọ na Fethullah Gülen (nke Turkey kwupụtara dịka otu ìgwè nke FETO). M na-eche na anyị ga-ahụ akụkọ mkpirikpi na Tarrant haziri nzukọ iji dọọ ntọala maka mkpụrụ ndụ ụjọ a. O nwere ike ịbụ na a ga - eme njikọ nke Balkan n'oge ochie - Agha Yugoslavia metụtara - Serbian ndị agha (onye ochie Ottoman iro). Nke a nwere ike ịpụta na anyị ga-ahụkwa ihe ndị dị otú ahụ (na m chere na ọ bụ Okpukpe) mwakpo na islam (ma karịsịa Turkey).
Lees naanị azụ ebe a ihe mere m ji na-emeso otu PsyOp (ime uche ọrụ) ọzọ.
Ihe a niile na-eme ka ntọala maka Europe na Europe na-atụ anya oge Europe. Ọ bụrụ na anyị ga-agba àmà nke ịrị elu nke ndị nkuzi nke Kraịst-fundamentalist egwu na njikọ ya na Serbia na FETO, mgbe ahụ, ọ bụ onye nlekọta zuru okè maka Erdogan ịbịa na Europe. M buru amụma nke a n'ihi na ọ bụ akụkụ nke edemede nke m kwuru na Alaeze Ukwu Ottoman ga-agbake maka 2023. Ihe odide a zutere amụma okpukpe ma zute akwụkwọ ozi sitere n'aka 1871, site na Scottish Ride Freemason Albert Pike nke onye 33e na enyi Giuseppe Mazzini, bụ nke o buru amụma banyere agha ụwa atọ. Ndi nke mbu bu ihe edere edere ma jiri ha mee ka ala Israel guzosie ike. Agha ụwa nke atọ ga-abụ maka Jerusalem ma ga - ewere ọnọdụ n'etiti ụwa Islam na ihe fọdụrụ nke ụwa Zionist. I kwesiri iche echiche banyere nke a banyere mgba n'etiti Ottoman Alaeze Ukwu na Israel tinyere US. Ị ga-achọta ihe dị ukwuu nke amụma m banyere nbilite n'ọnwụ nke Alaeze Ukwu Ottoman isiokwu a. N'ihe dị na nghọta nke ọma banyere ihe ndị dị ugbu a, ọ bara ezigbo uru ịhụ ihe a. Ya mere, gụọ isiokwu ahụ nke ọma.
Ka anyị chere maka ozi ndị dị nso n'ọdịnihu, ma ọ bụrụ na anyị ga-ahụ nwakpo nke ọgụ na ụda nku nke aka nri na-egosi na ọ dị mma ịhazi ya dị ka ekwensu site na igbe, cheta ọzọ amụma a.
Gụọ na isiokwu a otú ị ga-esi mụta ịhụ site na edemede ahụ.
Nzukọ NATO: mgbasa ozi na-anọ jụụ banyere nsogbu ndị gbara Turkey gburugburu EU
Site ugbu a na Turkey akụkọ ihe mere eme Atatürk Dutch ụlọ akwụkwọ: n'ihi na EU ga-abanye na Ottomans n'oge na-adịghị
Foto vidiyo nke onye na-agba egwu Brenton Tarrant (ndụ iyi) Christchurch New Zealand
Tags: mgbochi, Bitconnect, Brenton, oke, agba, FETO, Harrison, Ottoman, rechts, ọgaranya, Ntughari, iyi ọha egwu, ndo
17 March 2019 na 00: 57
"Anyị makwa na ị bịarutela ọtụtụ ihe gbasara ndị Kraịst oge mbụ na saịtị dị na Turkey," ka Erim kwuru, na-agbakwụnye, na-egosi na n'echiche ọ na-eche na ọ kpọsara online yana Hagia Sophia.
Hagia Sophia bụ ebe a na-edebe ihe ngosi nka nke ụlọ alakụba nke dị na Istanbul, nke bụbu nnukwu chọọchị Katọlik nke ndị Ọtọdọks Gris ruo 1453 mgbe Alaeze Ottoman meriri Istanbul.
17 March 2019 na 00: 59
Ndị Serbia sitere na Chọọchị Ọtọdọks Gris ma anyị nwere ike (ikekwe) na-atụ anya na a ga - ejikọta ya na Serbia.
Debe ụbọchị nke 29 na Mee - ụbọchị nke Fall nke Constantinople na 1453; Ndị Ottoman jidere Constantinople. Ọgwụgwụ nke Alaeze Ukwu Byzantium
Ànyị nwere ike ịtụ anya na ndị agha na-eyi ọha egwu na Istanbul (bụbu Constantinople)?
17 March 2019 na 01: 04
Ọ bụ Turkey ga-ejikọta ya na Donald Trump, n'ihi na ọ jụrụ iwebata Fethullah Gülen.
N'ụzọ dị otú a, ejikọta njikọ n'etiti ụda, ikike kachasị oke na mgbasa ozi ọzọ (dị ka Infowars, Alex Jones, wdg.) Nwere ike ịmegharị ìgwè anụ ụlọ na mgbasa ozi ochie. A na-edozi nchịkọta ụwa na nkatọ nke mgbasa ozi na ndị na-edegharị akụkọ ihe mere eme.
Nke ahụ bụ mmalite nke mmeghachi omume olu.
18 March 2019 na 23: 49
Enwere vidiyo na Facebook nke si na ụgbọala nke onye na-eme ihe nkiri. Otu egwuri egwu Serbian nke na-egwu na redio.
18 March 2019 na 23: 53
Ị nwekwara njikọ nke vidiyo ahụ?
19 March 2019 na 17: 29
Ọ bụ ndụ dị elu, mana Youtube na-egosi na iwepuwo vidiyo ahụ (akụkụ nke ịchọrọ egwu ...?)
17 March 2019 na 02: 44
17 March 2019 na 14: 54
Site site na ịghọta na a na-azụzi Tarrant na 2017 na 2018. Ị mara ugboro atọ nke mba?
17 March 2019 na 18: 46
@ Sunshine. Eziokwu na isi iyi biko. Ebumnuche gụnyere ajụjụ a na-azaghị ajụjụ ndị a na-azaghị abaghị uru.
30 March 2019 na 15: 33
" Foto vidiyo nke onye na-agba egwu Brenton Tarrant (ndụ iyi) Christchurch New Zealand
Nchikota New Zealand: nchikota nke ndi mmadu na ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu »
Nleta nile: 11.619.608
Jikọọ ndị 1.614 ndị ọzọ debanyere aha